विदेशी लिगमा उच्च प्रर्दशनसँगै सन्दीपले नाम र दाम कमाउँदै - City Post Daily
विदेशी लिगमा उच्च प्रर्दशनसँगै सन्दीपले नाम र दाम कमाउँदै
August 10, 2020 खेलकुद
काठमाण्डौ, २६ साउन । लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले विदेशी लिगमा उच्च प्रर्दशनसँगै राम्रो नाम र दाम कमाउँदै आएका छन् । लामिछानले दुई वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका चर्चित विदेशी फ्रेन्चाइज लिग खेलिसकेका छन् । सन् २०१८ मा इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) बाट सुरु भएको सन्दीपको विदेशी लिगको यात्रा त्यसपछि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । पछिल्लो समय प्रमुख स्पिनरको रुपमा अनुबन्ध हुने सन्दीपले पारिश्रमिक पनि त्यसै अनुसार उच्च पाउँदै आएका छन् । आईपीएलको अक्सनमा ३२ लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको सन्दीपको मूल्य करोडसम्म पुगेको छ ।
सन्दीपले आइपिएलसँगै, पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल), टि टेन लिग, ग्लोबल टि२० क्यानडा, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, क्वारेवियन प्रिमियर लिग (सिपिएल), बिग ब्यास लिग, बंगलादेश प्रिमियर लिग लगाएतका खेलेका छन् । जसमा प्रर्दशन औसत रहेको छ । एकरुपता प्रर्दशन गर्न सकि रहेका छैनन् । सन्दीपले विदेशी लिगमा गरेका पाँच उच्च प्रर्दशन यस प्रकार छन् ।
५. केराला नाइट्सबाट पाख्तुन्सविरुद्ध, टि टेन लिग
सन्दीपले सन् २०१८ को टि टेन लिगमा केराला नाइट्सबाट खेलेका थिए । सन्दीपले पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै ‘म्यान अफ द म्याच’ चुनिएका थिए । सन्दीपले केरालाबाट पाख्तुन्सविरुद्ध २ ओभरमा १७ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । उक्तक्रममा सन्दीपले कोलिन इनग्राम, आन्द्रे फ्लेक्चर र मुहम्मद कलीमलाई पेभिलिएन फर्काएका थिए ।
४. मेलबर्नबाट रेनेगेड्सविरुद्ध, बिग ब्यास
२०१९(२० को बिग ब्यास लिगमा सन्दीपले मेलबर्न रेनेगेड्सविरुद्ध पनि राम्रो प्रर्दशन गरेका थिए । सन्दीपले उक्त खेलमा ४ ओभरमा २६ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । सन्दीपले शन मार्श, टम कुपर र डानियल क्रिस्टियनको विकेट लिएका थिए । उक्त खेलमा मेलबर्न स्टार्स ८ विकेटले विजयी भएको थियो ।
३. बार्बाडोसबाट सेन्ट किट्सविरुद्ध, सिपिएल
२०१९ को सिपिएल सन्दीपले बार्बाडोस ट्राइडेन्टबाट खेलेका थिए । उक्त क्रममा सन्दीपले सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रिटसविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । उक्त खेलमा सन्दीपले ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । उक्त क्रममा सन्दीपले शम्राह ब्रूक्स, कार्लोस ब्रेथवेट र लौरी ईभान्सको विकेट लिएका थिए । जुन खेलमा बार्बाडोस १८ रनले विजयी हुँदा सन्दीप ‘म्यान अफ द म्याच’ चुनिएका थिए ।
२. मेलबर्नबाट सिड्नी सिक्ससविरुद्ध, बिग ब्यास
२०१८(१९ को बिग ब्यास लिगमा सन्दीपले मेलबर्न स्टार्सबाट सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । सन्दीपले उक्त खेलमा ३.४ ओभरमा मात्र ११ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । सन्दीपले टम करन, लोयड पोप र बेन द्वार्सिअसलाई आउट गरेका थिए । उक्त खेलमा मेलबर्न स्टार्स ९४ रनले विजयी भएको थियो ।
१. लाहोरबाट क्वेटा ग्ल्याडीयटर्सविरुद्ध, पिएसएल
२०१९ को पिएसएलमा सन्दीपले लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्दै क्वेटा ग्ल्याडीयटर्सविरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । सन्दीपले ४ ओभरमा १० रन खर्चेर ४ विकेट लिदै ‘म्यान अफ द म्याच’ चुनिएका थिए । सन्दीपले शेन वाट्सन, राइली रुसोले, उमर अकमल र डानिस अजिज गरि शीर्षक्रमका चार ब्याट्सम्यानलाई पेभिलिएन फर्काएका थिए । उक्त खेलमा लाहोर ८ विकेटले विजयी भएको थियो ।
यसैगरी, क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) भदौ २ देखि २५ सम्म ट्रीनिडाड एण्ड टोबेगोमा हुँदै छ । यसपटक नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने जमैका तलावाजबाट खेल्नेछन् ।सिपिएल खेल्न सन्दीप बिहिबार त्यसतर्फ लागिसकेका छन् । १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि सन्दीपको कोरोना परिक्षण हुनेछ । रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र सिपिएल खेल्न पाउँने छन् । नेपालमा उनको पिसिआर परिक्षणमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । सन्दीपलाई अक्सनमा जमैकाले एक करोड भन्दा बढि मूल्यमा अनुबन्ध गरेको थियो । सिपिएलमा सन्दीप सम्मिलित जमैका बलियो र सन्तुलित छ ।जमैकाले सिपिलएलमा दुई पटक उपाधि जितेको छ । सन् २०१३ को पहिलो संस्करण र २०१६ मा उपाधि जितेको थियो । दुवै पटक फाइनलमा जमैकाले गुयाना एमेजन वारियर्सलाई हराएको थियो । जमैकाले यस संस्करणको पनि उपाधिको बलियो दाबेदार टोली हो । जमैकाले उपाधि जित्न सक्ने ३ बलिया आधार पनि छन् ।
३. ‘म्याच विनर’ अलराउन्डर
जमैकासँग तीन ‘म्याच विनर’ अलराउन्डर छन् । आन्द्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवेट र पाकिस्तानका आसिफ अली प्रमुख अलराउन्डर हुन् । यी तीनै खेलाडीले मध्यगतिमा बलिङ गर्दा आक्रमक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । रसेल क्रिजमा रहँदासम्म जितको आशा रहिरन्छ । धेरै ब्याट्सम्यान गलत र कमजोर बलमा बढि छक्का प्रहार गर्ने गर्दछन् ।रसेल उत्कृष्ट बललाई पनि आफ्नो शरिरको पावर मार्फत छक्का प्रहार गर्ने क्षमता राख्दछन् । ब्रेथवेट र अलीले पनि तल्लोक्रममा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । टि२० खेलनै आक्रमकको खेल हो । उत्कृष्ट फिनिसर जमैकासँग छन् । यी तीनै खेलाडी ब्याट र बल दुवैबाट खेल जिताउन सक्छन् ।
२. बलियो शीर्षक्रम ब्याटिङ
जमैकाको शीर्षक्रम ब्याटिङ पनि बलियो छ । ओपनरमा न्युजिल्यान्डका विकेटकिपर ग्लेन फिलिप्स र वेस्ट इन्डिजका चाडविक वाल्टन छन् । यी दुवै ब्याट्सम्यान आक्रामक र ठूला सटको ब्याटिङका लागि परिचित छन् । गतवर्ष जमैकाबाटै फिलिप्सले १० खेलमा ३ सय ७४ रन बनाउँदै प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने चौथो खेलाडी बनेका थिए ।
वाल्टनले १० खेलमा २ सय ७ रन बनाएका थिए । रोभमन पावेलले तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्ने छन् । पावेल पनि त्यतिनै आक्रामक गर्न रुचाउँछन् । यी तीन ब्याट्सम्यानले राम्रो सुरुवात दिदा आसिफ अली, रसेल र ब्रेथवेटले तल्लोक्रम समाल्ने छन् । जसले गर्दा ब्याटिङ लाइनअप सन्तुलित छ ।
१. मजबुत बलिङ
जमैकाको बलिङ मजबुत देखिन्छ । स्पिन, मध्यम र तीव्र तीनै शैलीका बलर जमैकासँग छन् । स्पिनरमा सन्दीप र दक्षिण अफ्रिका बायाँ हाते तबरेज शाम्सी छन् । दायाँ हाते सन्दीप र बायाँ हाते शाम्सीको स्पिन जोडी नायक बन्न सक्छन् । तीव्र गतिका बलर ओशान थोमस र अनुभवी फिडेल एडवर्डस छन् । यी दुईसँगै रसेल, अली र ब्रेथवेटले पनि राम्रो बलिङ गर्ने गर्दछन् । पार्टटाईमा स्पिनरमा नक्रमाह बोनर छन् । जसले जमैकाको बलिङ मजबुत देखिन्छ ।
मच्छिन्द्र फुटबल क्लब आहा ! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा
मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग ब्रिगेड ब्वाइज क्लब ४–० ले पराजित
फ्लप फिल्मकी हिट हिरोइन वर्षालाई छायांकनको सेड्युल मिलाउन सकस